Ahoana ny fomba fakana sary amin'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Amin'ny Photoshop dia azo atao ny mamerina mamerina sary ara-dalàna ary manome azy io famaranana mitovy amin'ny an'ny sary taloha.
Ahoana ny faharetan'ny sary amin'ny Adobe Photoshop amin'ny fomba mora hahazoana fifandraisana hafa amin'ny sarinao. Samy miresaka ny famerenana amin'ny laoniny ny sary taloha ny tsirairay, fa ahoana kosa raha te hanao ny mifanohitra amin'izay isika? fahanterana sary izay maranitra tanteraka. Azo atao izany ary hianaranao ny hanao izany amin'ity lahatsoratra.
Ny sary efa antitra dia tsy inona fa ny vokatry ny fandehan'ny fotoana amin'ireo zavatra simika samihafa izay apetraka amin'ny taratasy fakana sary, ny fikafika dia ny jereo hoe toa inona ny sary taloha ary apetaho amin'ireo sary tsy antitra ireo fanovana ireo.
Ahoana raha te hanana sary isika fa tsy hamerina azy io? tsy afaka manao izany isika? eny eny, vitantsika izany ary amin'ny fomba roa samy hafa no hanaovantsika azy mampiseho fitaovana ahafahan'izy ireo manao ny fahanterany manokana ny sary.
Ao amin'io lahatsoratra hampiasa ireto fitaovana manaraka ireto izahay de Photoshop:
Fanitsiana sosona: famirapiratana sy fifanoherana, volony, mahavoky, haavon'ny, mainty sy fotsy.
Hianarantsika izao manaraka izao:
Ovay ny lokon'ny sary
Apetaho amin'ny sary ny firafitra
Avereno jerena ny masontsivana fototra sary misy fitaovana mandroso
0.1 Jereo ny sary azo jerena momba ny sary taloha
1 Sary voalohany ka hatramin'ny taona
1.1 Sehatra fanitsiana hue saturation
1.2 Apetaho amin'ny sary ny firafitra
1.3 Manamaizina ny faritra amin'ny sary
1.4 Manamaivana faritra ao amin'ilay sary
2 Fomba faharoa amin'ny sarin-taona
2.1 Avadiho ho mainty sy fotsy ny sary
2.2 Ovao ny jiro sary
Jereo ny sary azo jerena momba ny sary taloha
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika rehefa antitra sary dia ny mahafantatra manao ahoana ny sary taloha, izany no ilaintsika andinin-tsoratra masina inona no hitantsika ao Google.
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia misintona firafitra vitsivitsy hampihatra azy eo amin'ny sary sy hahatonga azy ho antitra, noho izany isika dia afaka mampiasa karazana sary Banky na mitady mivantana ao anaty Googlary manome antoka fa hampiasa ilay safidy fampiasana sary maimaimpoana.
Rehefa efa manana endrika iray na maromaro isika dia ny zavatra manaraka ataontsika dia sokafy ny sary eto Photoshop ary manomboka miasa. Afaka mampiasa karazana sary avy amin'ny Internet izahay hanao fanazaran-tena alohan'ny hampiasana ny anay, amin'ity tranga ity dia nampiasa sary avy amin'ilay sarimihetsika izahay Wonder Woman.
Sary voalohany ka hatramin'ny taona
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika fomba roa hamehezana sary, amin'ity fomba voalohany ity no hataontsika dia asio firafitra amin'ny sarinay fanajana ny loko (amin'ity tranga ity dia feo sepia) amin'ny kinova manaraka dia hamorona a izahay kinova mainty sy fotsy.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manokatra ny sarin'ny Photoshop.
Sehatra fanitsiana hue saturation
Mamorona sosona fihenan'ny feo izahay hanova ny lokon'ny sarinay, amin'ity tranga ity dia homenay ny sarinay a feom-boasary sepia. Mba hanaovana izany dia mila tsindrio fotsiny ny safidin'ny fanitsiana ao amin'ny faritra misy sosona isika ary tadiavo ireo saturation hue sosona fanitsiana. Ao anatin'io sosona io no tsindrio ny boaty miloko ary ovainay ny lokon'ny sarinay araka ny ahitanao ny sary.
Raha vantany vao noforonina ny sosona, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia asio firafitra amin'ny sarinay hahazoana io vokany taloha io.
Raha mampihatra ilay endriny amin'ilay sary dia tsy maintsy atao fotsiny tariho ny volonay ary apetraho eo ambonin'ny sarintsika izany. Raha vantany vao manana isika ny firafitra eo ambonin'ny sarinay ny hataontsika dia ny manova ny maody sosona manomboka amin'ny mahazatra ka hatramin'ny maro.
Manamaizina ny faritra amin'ny sary
Rehefa ampiharina ny firafitra dia ny zavatra manaraka hataontsika dia asio aloka mba hanamaizina ny faritra sasany amin'ny sarintsika, ny zavatra mahazatra rehefa mahita sary taloha dia izy faritra maizina kokoa noho ny hafa.
Mba hahazoana manamaizina faritra sasany avy amin'ny sary hampiasainay a curves fanitsiana sosona amin'ny mode multiply multiply, rehefa manana an'ity sosona ity isika dia hanery ny hitsin-dàlana + i hitsin-dàlana mamadika ny sosona. Ny fandidiana an'io sosona io dia mora foana satria miasa toy ny borosy ihany, novainay ny maody sy ny hatevin'ny borosy mba hifanaraka amin'ny sarinay. Ny filamatra dia mampiasa opacity ambany hanao ny fanovana tsikelikely.
Rehefa avy nanamaizina ireo faritra misy ny sarinay, ny zavatra manaraka tsy maintsy ataontsika dia ny mifanohitra amin'izany, manazava faritra ny sarintsika.
Manamaivana faritra ao amin'ilay sary
Manazava ny faritra amin'ilay sary izay tokony hataontsika mamorona sosona fanitsiana miolakolaka ary ovao ny maody sosona amin'ny normal ka hatramin'ny weft, raha vao manana ny sosona isika dia manery el fanaraha-maso hitsin-dàlana + i mamadika azy. Miaraka amin'ny fanampian'ny borosy dia mandoko ireo faritra izay tianay hazavaina amin'ny sarinay izahay.
Aorian'ireny dingana ireny Nahavita nitafy ny sarinay taona vitsivitsy izahay, sa tsy izany? Azo antoka fa am-polotaona maro.
Fomba faharoa amin'ny sarin-taona
Amin'ity fomba faharoa ity dia hanova ny sary mainty sy fotsy mampihatra karazana vokatra hafa hahazoana sary hafa.
Ny fanovana ny sarintsika ho mainty sy fotsy izay tokony hataontsika dia mamorona sosona fanitsiana mainty sy fotsy amin'ny sary tany am-boalohany.
Rehefa manana ny sary mainty sy fotsy isika dia afaka manomboka mampihatra ireto sosona fanitsiana manaraka ireto hanohizana ny fahanteran'ny sary.
Ovao ny jiro sary
Amin'ity ampahany ity dia hanova ny Famirapiratana sy fifanoherana ny sarintsika mba hampamirapiratra kokoa ny sary toa ny zavatra iray nodoran'ny hazavana be loatra.
Ny zavatra manaraka ataontsika dia ovao ny haavon'ny sary hahazoana ny jiro sy ny aloka hifanarahana. Mamorona a haavon'ny sosona ary apetrakay ireo masontsivana araka ny hitanao amin'ny fisamborana.
Ny zavatra manaraka azontsika atao dia manamaizina sy manamaivana ny faritra mamorona sosona fanitsiana ampitomboina ny fiolahana maody sy ny tetika. Hampiasa ny sosona fanitsiana miolakolaka izahay mampitombo fomba hanamaintisanar faritra amin'ny endritsika, ny ataony dia manazava ny teti-dratsy.
Ny fahafaha-manao sary antitra dia samy hafa be satria miankina betsaka amin'izay tadiavintsika izany, miaraka amin'ireo dingana kely ho azonao ireo mamorona karazan-tsary taloha rehetra raha manomboka mikorontana amin'ny masontsivana amin'ny fitaovana rehetra hitanay ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny faharetan'ny sary amin'ny Adobe Photoshop